Qaamuska Muxadithinta -Hordhac | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Qaamuska Muxadithinta -Hordhac
Ilaah swt waxuu umaddan ka dhaliyay Culimo rabaaniyiin ah kuwaas oo wakhtigoodii dhanaa u huray siday sunadda Rasuulkiisa (sallalaahu calayhi wasallam) u ilaalin lahaayeen sido kalena oga gaashaami lahaayeen mid welba oo doonaya inuu duro.
Hadaba Qur’aanka Ilaah swt waa Mutawaatir oo dhamaantii waa la isku raacay sida uu yahay, cidina wax kama saari karto cidina wax kuma soo dari karto.
Balse Sunnada waxaa ku jira axaadiis mutawaatir ah iyo kuwa aan mutawatir ahayn oo isugu jira qaar ay werinayaan 1 qof, laba qof sadex qof iwm. Sidaa daraadeed waxaa la arkay qaar badan oo axaadiithka Rasuulka (sallalaahu calayhi wasallam) ku soo daraya waxuusan odhan ama ka saaraya wax uu yidhi.
Hadaba culimadu waxay sameeyeen gaashaan culus oo ay kula dagaalamaan dadkaas. Waxayna sameeyeen cilmi la yidhaah ”Musdhalaxul xadiith”. Erayada ay isticmaalaan waa kuwa iyaga u gooni ah oo waxaa dhacda in kelmad carabi ah oo aad micna u taqaan inay ayagu micna kale u yaqaanaan.
Sidaa daraadeed qofka daalibul cilmiga ah ee doonaya inuu barto cilmigan waxuu ku qasbanyahay inuu barto Afartan waxyaabood, mid welbana gooni ayaanu u sharixi doonaa in sha Allah:
1) Musdhalaxaatka Muxadithiinta
3) Muxadithiinta waa weeyn Taariikhdooda , manhajkooda, shuruudahooda, qaabkooda, waxyaabaha u gaarka ah iwm.
4) Kutubta Xadiithka noocyadooda, waxyaabaha ay ka hadlayaan, shuruudoda, kuwa kutubta leh turjumadooda iwm.
Hadaba waxaan isku dayaynaa inaanu qodob welba yara faahfaahino bi’idnillahi tacaalaa.
Waxaa lagama maarmaan ah in aad barato luuqada muxadithiinta ee ah Carabiga. Sidoo kale carabi qofkii yaqaan xataa ma fahmayo carabiga muxadithiinta ila uu ka fahmo musdhalaaxtkooda.
Waxaa lagama maarmaan ah in ardaygu barto Qawaacidaha ay dejiyeen culimada muxadithiintu. Fanni kasta qawaacid u gooni ah ayuu leeyahay. Marka waa inuu ardaygu ogaado qawaacidah kala duwan ee ay muxadihtintu dejisteen.
Maxay tahay faa’iidada inu ardaygu barto arintan?.
Faa’iidadu waxaa weeye, haddii qof uu doonayo inuu qoom/dad la wadaago cilmi ama dhaqan ama siffo waxuu horta ku qasbanaan inuu iyaga bartaa si tafsiil ah/cad.
Markasta oo uu dadkaas barashadooda/aqoonta uu uleeyahay ay sii waasic-sanaato ayay markasta u ziyaadi inuu ku intifaaco.
4) Kutubta Xadiithka noocyadooda, waxyaabaha ay ka hadlayaan, shuruudoda, kuwa qora turjumadooda iwm.
Kutubtu waxaa weeye marjac iyo meesha xarunta u ah Cilmigan (xadiithka). Qofka ardayga ah lama odhan karo waa daalibul cilm xadiith ilaa inuu ka ogaado ama ka barto mooyee kutubta kuwooda ogu muhiimsan, ogu intifaacsan, ogu saxiixsan iyo sidoo kale inuu kala barto waxyaabaha ay kakala hadlaan
Afartaa arimood ee ardayga laga doonayo inuu wax ka ogaado waxaa jira kitaab qiima badan oo laga qoray. Kitaabkaas oo sheegaya Lafdhi welba oo kusoo arooray kutubta xadiithka oo ah odhaah ay isticmaaleen muxadithintu ama qaacido ay isticmaaleen . Kitaabkasna waxaa la yidhahdaa ” Lisaanul Muxadithiin” (Mucjamu musdhalaxaatul Muxadithiin)
Sidanaan u wadi doonaa Kitaabka in sha Allaah.
– Kitaabka waxa ku jira oodhan masoo wada qaadanayo sababtoo ah waa 5 Mujalad. Waxaan isku dayyi inta ogu muhiimsan inaan kasoo qaado
– Lafdhi welba micnahiisa ayaan sheegi
– Haduu kitaabku sheegayo lafdhiga imaamka /a’imada isticmaalay ana waan soo guurin in sha Allah
La soco Qaybaha hadhay
from → Duruus Yaryar Cilmul Xadiith, Qaamuska Muxadithiinta-Hordhac
← Nuzhatu Nadhar Sharx Nukhbatul Fikr—Sheekh Maazin As-sarsaawi
Waraysi kooban Sheekh Bashiir Shiil →